site na nchịkwa na 21-05-27
Beijing Wistron Technology Ltd. Traffic Equipment Co., LTD. na -emepụta okporo ụzọ okporo ụzọ anyanwụ na anya nwamba ọkụ LED na -enye ìhè na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ụlọ ọrụ na -ahụ maka okporo ụzọ nke Wistron na -enye aka ibelata ọnụ ọgụgụ ihe mberede okporo ụzọ na ọnwụ na ụfọdụ ụzọ ọnwụ. Teknụzụ nke Beijing Wistron ...
Otu esi etinye studs anwụ anwụ
Ọrụ na ebe eji eme ihe nke okporo ụzọ anyanwụ dị iche iche. Ntinye nke okporo ụzọ okporo ụzọ anyanwụ chọrọ usoro nkwadebe ndị a. Nke mbụ, kwadebe ngwaọrụ maka ịwụnye stud okporo ụzọ anyanwụ. Ngwaọrụ dị mkpa iji wụnye studzọ anwụ anwụ bụ: tụọ wiil na ihe nrịbama, igodo isi, mgbagharị isi, ...
Ihe edeturu ntuziaka na Solar Cat Eye Road Studs Charging
A gaghị arụ ọrụ oge abalị zuru oke nke okporo ụzọ cat cat anya okporo ụzọ (ihe karịrị awa 200+ na-akwụsịghị akwụsị-na-enweghị ikpughe n'ihu ìhè ehihie) agaghị enweta ya ruo mgbe chajịrị cha cha n'èzí. N'oge a na ikpughe n'èzí na -aga n'ihu, nnukwu ikike nchekwa na -enyere ndị ...
kedu ihe dị iche n'etiti plastik ma ọ bụ aluminom okporo osisi?
site na nchịkwa na 20-06-17
• Ogwe okporo ụzọ aluminom na -adịte aka ma nwee ogologo ndụ karịa okporo ụzọ plastik. • Ọnụ ego nke akụrụngwa aluminom dị elu karịa nke rọba n'ihe gbasara ọnụ ahịa ịzụrụ. Ya mere, ọnụ ahịa okporo ụzọ aluminom dị 40 % dị ọnụ karịa stud okporo ụzọ plastik nke nha ndị yiri ya. • rọba ...